IPFS: Ahoana ny fampiasana ny System Interplanetary File System ao amin'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Amin'izao fotoana izao, mivezivezy amin'ny Internet (Cloud / Web) dia miorina indrindra, eo ambanin'ny Protocol famindrana hypertext (HTTP), izany hoe, HTTP dia ny protokolan'ny tambajotra ampiasaina eran-tany hijerena ny World Wide Web (WWW). Hatramin'ny andro namoronana azy (1989-1991) ary nandritra ny fisiany dia nanana fanovana na kinova maro izy. HTTP 1.2, dia nanan-kery nandritra ny 15 taona, hatramin'ny HTTP 2, Navoaka tamin'ny Mey 2015. Ary mety izao, HTTP 3 avoaka tsy ho ela.
Na izany aza, misy koa protokol hafa hafa, manavao ary mahaliana amin'ny fampandrosoana. Iray amin'izany IPFS izay miorina amin'ny a Protokol hypermedia P2P (Peer-to-Peer - Person to Person), ary natao hanatanterahana ny tranonkala haingana kokoa, azo antoka ary misokatra kokoa.
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, nantsoina "IPFS: Rafitra mandroso miaraka amin'ny P2P sy Blockchain Technology" Manome fanamarihana amin'ny antsipiriany momba azy izahay: Inona ny atao hoe IPFS, inona ny toetra mampiavaka azy, ahoana ny fomba fiasany?, Ankoatry ny zavatra hafa. Noho izany, ity manaraka ity dia mendrika nalaina fohy avy tao aminy:
"... IPFS dia afaka mameno na manolo ny Hypertext Transfer Protocol (HTTP) amin'izao fotoana izao, izay manatanteraka fampitana fampahalalana amin'ny rahona (tranonkala) amin'ny sehatra manerantany. Noho izany, ny IPFS dia mikasa ny hanova ny fiasan'ny Internet ankehitriny mifototra amin'ireo mpizara afovoany ho tranonkala iray voazara tanteraka eo ambanin'ny P2P Technology sy Blockchain. Mba ho lasa rafitra rakitra zaraina, miaraka amin'ny reperitoara sy rakitra, izay afaka mampifandray ireo fitaovan'ny solosaina rehetra sy ny atiny nomerika, manerantany, miaraka amin'ilay rafitra fisie mitovy".
Mandritra izany fotoana izany dia hifantoka amin'ny fametrahana sy fampiasana, avy amin'ny azy Mpanjifa ofisialy for GNU / Linux.
1 Ahoana ny fampiasana IPFS - Rafitra rakitra eo anelanelan'ny sehatra?
Ahoana ny fampiasana IPFS - Rafitra rakitra eo anelanelan'ny sehatra?
Ampidino ny mpanjifa ipfs-birao do tranokala ofisialy. Amin'ny fotoana anoratana ity lahatsoratra ity dia ny 0.10.4, ary azo alaina amin'ireto endrika manaraka ireto:
Vantany vao alaina, amin'ny tranga misy anay dia ilay rakitra ipfs-desktop-0.10.4-linux-amd64.deb, manohy mametraka azy amin'ny baiko manaraka izahay:
Mihazakazaha ny «Cliente de escritorio IPFS Desktop» avy amin'ny Main menu, hita ao amin'ny faritra Internet. Raha tsy mandeha amin'ny fomba mahafa-po izy ity dia andramo atao ireto manaraka ireto:
Ampidiro ao anaty rakitra Tambajotra IPFS avy amin'ny «Cliente de escritorio IPFS Desktop», avy amin'ny faritra "Records" ary mampiasa ny bokotra "Ampidiro amin'ny IPFS". Azonao atao ny mandray azy io rakitra (s) sy / na folder (s) mivantana avy amin'ny solosaina na amin'ny alàlan'ny làlan'ny tranonkala IPFS. Ary koa, ny lahatahiry dia azo foronina ao amin'ny «red IPFS» Avy any.
Raiso ary zarao ny hash na ny làlana ipfs feno an'ny rakitra (s) sy / na folder (s) feno, amin'ireo mpampiasa tambajotra maniry hiditra ao aminy, amin'ny alàlan'ny Menio 3-teboka (…) izay miaraka amin'ny singa tsirairay ao anaty «red IPFS».
Andramo ny fidirana amin'ny rakitra (s) sy / na folder (s) fenoina, amin'ny fampiasana ny tranokala ary ny làlana feno ipfs nahazo. Izay, mety ho ohatra, dia hoe misy a Rakitra video 17MB izay nakariko, ho toy ny demo ho an'ilay lahatsoratra:
Raha fintinina, araka ny ahitanao ny fomba tsotra, ary ny «red IPFS» mety ho an'ny oh: mampakatra sy mizara loharano rakitra (s) sy / na folder (s) fa amin'ny fomba hafa, tsy azo zaraina noho ny tsy fitovizan'ny endrika, fetran'ny habe na sakana atiny manokana.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fomba fampiasana an'io tantara tsy manam-paharoa sy vaovao io Rafitra fisoratana anarana eo amin'ny sehatra hafa fantatra amin'ny anarana hoe «IPFS», izay manolotra a Tranonkala nozaraina, ambanin'ny a Protokol hypermedia P2P hanao izany haingana, azo antoka ary misokatra bebe kokoa, fa ny fomban-drazana, dia mahaliana sy mahasoa indrindra ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » IPFS: Ahoana ny fampiasana ny System Interplanetary File System ao amin'ny GNU / Linux?
Fotoana Popcorn: versi beta vaovao 4.0 hijerena sarimihetsika sy andian-tserasera